UVUKELO: I-ABC IYALELA IIDRAMA NGOKATEY SAGAL OVELA KWIGREY'S ANATOMY BOSS - IINDABA
Uvukelo: I-ABC Orders Drama eneNkwenkwezi uKatey Sagal ovela kwiGrey's Anatomy Boss
IGrey's Anatomy kunye nesikhululo se-19 somphathi uKrista Vernoff unokuba nezintathu ziveza umoya kwi-ABC ngeli xesha lonyaka.
Uluntu losasazo luyalele ukuba kuqokelelwe umdlalo weqonga.
Ingqungquthela yenkulumbuso ebhalwe nguKrista Vernoff kwaye ikhokelwe nguTara Nicole Weyr.
Uphefumlelwe ngu-Erin Brockovich ngeli xesha, u-Annie Rebel Bello ngummeli ogunyazisiweyo onekhola eliluhlaza kwaye engasebenzisi idiploma yomthetho.
Ulinenekazi elihlekisayo, elonakeleyo, elilungileyo nelingoyikiyo elikhathalele ngokubhekisele kwizizathu azilwelayo nangabantu abathandayo.
Xa uMvukeli ezifaka kumzabalazo akholelwa kuwo, uza kuphumelela phantse naliphi na ixabiso.
U-Erin Brockovich akakhange ayeke umsebenzi ongaqhelekanga awenzayo wokulwa abathengi bakhe ngokungathi ngabendlu, kwaye uKrista Vernoff ujongana nobomi bakhe ngeli xesha 'kwiRebel' ilula, utshilo uKarey Burke, umongameli, iABC Entertainment.
UKatey Sagal yindawo yamandla 'njengoMvukeli' kunye noAndy Garcia, uJohn Corbett kunye nentsalela yokuqina okuqaqambileyo, ababukeli bazokuthandana nala bantu kunye nehlabathi u-Krista abadalele lona.
Umsebenzi owenziwa ngu-Erin Brockovich kweli lizwe usebenze kakhulu kwaye ubaluleke kakhulu kangangokuba uphantse wachaza inkcazo, ukhankanyile uVernoff.
U-Erin usebenza ngokungakhathali kwezoluntu, egunyazisiweyo kunye nobulungisa bendalo esingqongileyo nokuba kunjani na ukunqongophala kwediploma efanelekileyo. Uguqula wonke umntu adibana naye ukuba akhule abe ngamaqhawe abo, kwaye ngandlela thile, usigcina sihleka.
Kube yimbeko engathethekiyo ukwazi u-Erin kunye nokwenza umboniso ochukumisiweyo nguye, uqhubeka uVernoff.
Ndonwabile ukusebenza nephupha eliqinileyo elikhokelwa nguKatey Sagal ongaqhelekanga kunye nokukhokelwa kukaTara Nicole Weyr.
Khange ndikwazi ukonwaba ngakumbi malunga nokuqokelelwa kwe-'Rebel, 'kwaye ndinombulelo omkhulu ngoncedo lukaDana Walden, Karey Burke, Craig Hunegs, Jonnie Davis kunye nawo onke amaqabane am eWalt Disney Television nakwiABC.
'Umvukeli' ayilo bali lam nje kuphela, zonke ziintsomi zethu. Kukho iqhawe elikhona kuthi sonke, kwaye ndinemincili ngoKrista Vernoff kunye no-ABC ukuba bagqithise ukubalisa kwabo amabali kule ngqokelela, kukhankanywe u-Erin Brockovich.
Ukuchonga 'uMvukeli' kukhuthaza ukuzixhobisa, isibindi kunye nokunyuka ngaphezulu, nkqu nakwezona meko zimbi. Andinakuthatha namnye umntu ophakamileyo ukuba angadlala esi sikhundla ngaphandle kokungenakoyiswa nguKatey Sagal, oligunya elinjalo, ukongeza kwintsalela yesi siqina singaqhelekanga.
Iingqokelela zeenkwenkwezi uKatey Sagal njengo-Annie Rebel Bello, uJohn Corbett njengoGrady Bello, uJames Lesure njengoBenji, uLex Scott Davis njengoCassidy, uTamala Jones njengoLona, uAriela Barer njengoZiggie, uKevin Zegers njengoNate, uSam Palladio njengoLuka, noAndy Garcia njengo Cruz.
Imiboniso bhanyabhanya ehlekisayo kwi-2018
Uvukelo ngurhulumente oveliswe nguKrista Vernoff no-Alexandre Schmitt we-Trip the Light, u-Erin Brockovich, uJohn Davis noJohn Fox we-Davis Entertainment kunye no-Andrew Stearn.
Ingqokelela iveliswa ngotyikityo lwe-ABC ngokunxulumana ne-Sony Pictures Television. Utyikityo lwe-ABC yinxalenye yeDisney Television Studios, ecaleni kwamashumi amabini iThelevishini kunye neTouchstone Television.
Iindaba zomyalelo wokuqokelelwa kwehle nje iiyure kwangoko kunokuba zazisiwe ukuba iStumptown irhoxisiwe ngenxa ye-ABC engenayo indawo kwishedyuli yayo.
Izigaba: Hulu Hollywood Umqala
mde kangakanani katelyn ohashi
Abalwi be-foo bakhokela imvumi
dulce ilekese ngexabiso elifanelekileyo
UMichelle rodriguez umyeni wesoka